Axlin's bestiary: akụkọ ọzọ dị egwu sitere na Laura Gallego | Akwụkwọ dị ugbu a
John Ortiz | | Egwu efu, Akwụkwọ ndị ntorobịa, Novela
Nkebi ahịrịokwu site na Laura Gallego.
Ahụ kacha mma nke Axlin bụ ọrụ nke akwụkwọ mara mma nke onye edemede Valencia pụtara ìhè Laura Gallego dere. Ebipụtara ya n'April 2018 ma debe ya n'ebe ndị nnukwu anụ ọjọọ bibiri ya. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ mbụ nke trilogy GUardians nke Citadel; ha na-akwado: Ihe nzuzo Xein (2018) na ozi Rox (2019).
N'ihi mgbalị ya, Laura Gallego aghọwo akara ngosi na ụdị echiche efu, na-eme ka ndị na-eto eto na-ege ntị nwee mmetụta miri emi. The saga Ncheta Idhun ọ bụ otu n'ime akwụkwọ ya kacha emetụta, nke e rere ihe karịrị nde 1 n'ime ya. EAha ya bụ Axlin ọ nọchiri anya nlọghachi mmeri nke nwanyị Valencian; a nabatara akụkọ ahụ nke ọma nke na e nyere ya na 2019 site na magazin ahụ Ụlọ nsọ nke otu puku ọnụ ụzọ dị ka akwụkwọ akụkọ National kacha mma nke Saga.
1 Nchịkọta nke Axlin's Bestiary
1.1 Ụwa dị iche
1.2 Nwa agbọghọ pụrụ iche
1.3 Ụdị ọhụrụ
1.4 Detuo banyere nnukwu anụ mmiri
1.5 Njem egwu dị ize ndụ
1.6 Obodo pụrụ iche
4 Banyere onye edemede, Laura Gallego
4.1 Ọmụmụ na ụzọ izizi nke akwụkwọ ozi
4.2 Ọmụmụ mahadum na mbipụta mbụ
4.3 Arụ ọrụ dị mkpa
4.4 Ọrụ nwere mgbago na-enweghị nkwụsị
4.5 Ihe nrite ndị ọzọ dị mkpa ọ natara
4.6 Laura Galler na-arụ ọrụ
4.7.1 Akwụkwọ nke ọ bụla
Na nchikota nke Ahụ kacha mma nke Axlin
Ụwa dị iche
Anụ ndị na-atụ ụjọ na-awakpo ndị bi n'ime nnukwu ókèala kwa ụbọchị. Ndị ajọ omume ndị a raara onwe ha nye igbu mmadụ na iripịa mmadụ n'enweghị ọmịiko, na-agha egwu n'ebe ọ bụla ha gafere. Ndị mmadụ—bụ́ ndị gbara arụkwaghịm n’ọnọdụ ndị metụtara ha—na-anọpụ iche mgbe nile, na-enwe usoro ihe omume dị mfe na-elekwasị anya n’ịdị ndụ ruo ogologo oge o kwere mee.
Nwa agbọghọ pụrụ iche
Axlin Ọ bụ akpan akpan nwa agbọghọ bi na obere mpaghara ụdị anụ ọhịa anọ pịara ya ihe. Mgbe ọ bụ nwata, otu ihe atụ a maara dị ka "knotty" wakporo ya. N'agbanyeghị ịlanarị mwakpo ahụ, nkwonkwo ụkwụ gị o merụrụ ahụ n’ihi ya, ọ dara ngwọrọ. Nkwarụ ya anaghị enye ya ohere iji ike na-agba ọsọ ma ọ bụ na-agba ọsọ mgbe a na-ebuso ya agha.
N'ihi na ọ pụghị iji ịnụ ọkụ n'obi chebe onwe ya. Axlin na-achọ ụzọ ndị ọzọ ọ ga-esi nyere ndị mmadụ ibe ya aka. Ọ dị ka otu ụbọchị onye ode-akwukwọ obodo na-enye ya ka ọ kụziere ya ịgụ na ide, a ga-anọchi anya n'ọdịnihu. Ọ bụ ezie na ndị a bụ nkà dị oke mkpa, ọ dịghị onye nwere mmasị ịmụta ha, ha ledara ha anya; Ka o sina dị, nwa agbọghọ ahụ nabatara. Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, mgbe nwoke a nwụrụ, Axlin ghọrọ ọhụrụ odeakwụkwọ nke enclave.
Detuo banyere nnukwu anụ mmiri
Jiri nwayọ ike ya tolitere, dị ka ọ na-agụsi agụụ ike ịmatakwu banyere nnukwu anụ mmiri. Mgbe ọ bụla otu ìgwè si njem na-alọta, ọ na-ajụ ha banyere ahụmahụ ha na àgwà nke ndị obi tara mmiri. Edere ozi niile n'akwụkwọ, ka e wee mee onye ndu ka ọgbọ na-abịa abịa wee chebe onwe ha megide ha.
Mmasị ya na-abawanye ọbụna mgbe ọ chọpụtara na e nwere ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ, ya mere o mere mkpebi dị mkpa. Axlin kpebiri ime njem dị ogologo iji nyochaa ma nweta data sitere na ahụmịhe nke ya. Nke a bụ otú nwa agbọghọ ahụ si malite njem nlegharị anya nke ọ ga-ahụ ihe atụ dị egwu. Nke a na-eme ka ederede gị baa uru ọbụna karị, na-aghọ onye anụ ọhịa zuru oke.
Obodo pụrụ iche
N'ụzọ, Axlin ga-ezute ọhụrụ odide ga-abụkwa na ndụ ya, dị ka Xein. N'otu aka ahụ, ọ ga-achọpụta na e nwere obodo na-enweghị nnukwu anụ a na-akpọ Citadel, ya mere ọ na-elekwasị anya n'ịbịarute ebe ahụ. Ime ọrụ ọhụrụ a na-akpali ya nke ukwuu, na site n'iche na ọ ga-amata onye nọ n'akụkụ ya n'ezie. Agbanyeghị, mgbe ị rutere na "saịtị ewepụtara" ị ga-achọpụta na ọ bụghị n'ezie ihe ị tụrụ anya ya.
Axlin's bestiary bụ otu fantasy akwụkwọ nke ụdị nwa ọhụrụ / nwata nwere isi iri atọ na asaa nke na-apụta na ntakịrị ihe karịrị ibe 500. Edebere ya n'ụwa nke nnukwu anụ na-eti ma kewaa ya n'ọgbachi. Akụkọ ihe mere eme A kọrọ ya na onye nke atọ site na agwa dị iche iche; o nwere akọrọ akụkọ dị omimi site na mmalite ruo n'isi.
Ọ bụ onye na-akwado akwụkwọ akụkọ ahụ. Akụkọ na-amalite dị ka nwa agbọghọ na na uto ya n'ime atụmatụ ahụ ị ga-ahụ ka o si too na ule ọ bụla ọ na-agafe. Mkpebi amamihe ya na-eduga ya ime onye obi ike nwa agbọghọ nke mechaa ghọọ ode akwụkwọ obodo ya, N'ihi ya o kpebiri ịrụ ọrụ siri ike ma dị mkpa maka ndị ọzọ bi na ya: ịkọwapụta onye anụ ọhịa.
Ọ bụ onye edemede ọzọ nke akụkọ ahụ onye odee nyefere ọtụtụ isiakwụkwọ. Ọ bụ nwa okorobịa ya na nne ya bi n'otu n'ime ogige ahụ, ha abụọ nọpụrụ iche ruo mgbe Axlin rutere. Ndụ ya na-eme mgbanwe dị ukwuu site na ịbụ nwa nwoke na-anọ naanị ya ka ọ bụrụ onye na-achọsi ike nke otu a na-akpọ "Ndị nche."
Banyere onye edemede, Laura Gallego
Ọmụmụ na ụzọ izizi nke akwụkwọ ozi
A mụrụ Laura Gallego García na Tuesday, October 11, 1977 na obodo Valencian nke Quart de Poblet na Spain. Kemgbe ọ bụ nwata ọ na-enwe mmasị na akwụkwọ. ihe akaebe nke a bụ na Mgbe ọ dị afọ 11, ya na otu enyi ya, ọ malitere ide akwụkwọ efu. O were afọ atọ ijikọkọta ọnụ wee bụrụ akụkọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ peeji 300 a na-akpọ Zodiac, ụwa dị iche, ma ha ebipụtaghị ya.
Ọmụmụ mahadum na mbipụta mbụ
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ sekọndrị, ọ debanyere aha na Mahadum Valencia, na ọrụ Hispanic Philology. N'oge ahụ, Laura edeworị akwụkwọ 13, e zigara ha niile na ndị na-ebipụta akwụkwọ na asọmpi, ma ha enwebeghị ike ibipụta ya. Ruo mgbe nọmba 14 bịara, Ọgwụgwụ nke Ụwa (1999), ọrụ nke onye edemede nwetara ihe nrite Barco de Vapor site na Editorial SM.
Arụ ọrụ dị mkpa
Gallego gara n'ihu na-ede ihe n'akwụsịghị akwụsị, ọrụ ọzọ ya bụ tetralogy Ihe ndekọ nke Ụlọ Elu (2000). O bipụtakwara ọrụ ndị mmadụ n'otu n'otu, dịka Laghachi na White Island (2001) na Ụmụ nwanyị Tara (2002). N'afọ 2003, e nwetara ya ọzọ onyinye nrite kwa afọ site na Editorial SM, yana La akụkọ ifo eze na-awagharị ejegharị. Ihe ịga nke ọma a sochiri ọrụ ndị ọzọ dịka: Onye nchịkọta nke nche pụrụ iche (2004).
Ọrụ nwere mgbago na-enweghị nkwụsị
Site na mgbe ahụ, Ọrụ agụmagụ na-arị elu, na-enye ọtụtụ akwụkwọ ndị nọọrọ onwe ha na saga ise. N'ime ndị ikpeazụ anyị nwere ike ikwu banyere trilogies Ncheta Idhun (2004) na Ndị nche Citadel (2018). N'otu aka ahụ, Gallego ji usoro a tinye aka n'ụdị eziokwu agụmagụ Sara y ndị na-agba akara, nke nwere akwụkwọ isii.
Ọ bụ nnukwu ọrụ agụmagụ ya, onye Valencian ebipụtala ihe karịrị akwụkwọ akụkọ iri anọ - echiche efu, ọkachasị - ma sụgharịa ya n'ọtụtụ asụsụ.
Ihe nrite ndị ọzọ dị mkpa ọ natara
Cervantes Chico nke akwụkwọ ntorobịa (2011)
Akwụkwọ akụkọ ụmụaka na ndị ntorobịa nke mba na 2012 site na Ebe osisi na-abu abu (2011)
Imaginamalaga 2013 site na Akwụkwọ Portals (2013).
Laura Galler na-arụ ọrụ
Okwu sitere na Laura Gallegog
Akwụkwọ nke ọ bụla
Ọgwụgwụ nke Ụwa (1999)
Laghachi na White Island (2001)
Taramụ nwanyị Tara (2002)
Ebee ka Alba dị? (2003)
Akụkọ mgbe ochie nke Eze Wandering (2003)
Mmụọ nọ na nsogbu (2004)
Max anaghịzi eme gị ọchị (2004)
Ada n'abalị (2004)
Onye nchịkọta nke nche pụrụ iche (2004)
Alba nwere ezigbo enyi (2005)
Onye eze ukwu nke ethereal (2007)
Kandụl abụọ maka ekwensu (2008)
Ebe osisi na-abu abu (2011)
Akwụkwọ portals (2013)
Ihe ngosi niile nke alaeze (2015)
Mgbe ị hụrụ m (2017)
Maka rose (2017)
Ihe niile ị nwere ike rọrọ nrọ (2018)
Okirikiri nke eze ukwu ebighi ebi (2021)
Akụkọ ihe mere eme nke Ụlọ Elu:
Ndagwurugwu Wolves (2000)
Akọcha nke Nna-ukwu (2001)
Oku ndi nwuru anwu (2002)
Atọ n'ime (2005)
Sara na Goleadoras:
Mepụta otu (2009)
Girlsmụ agbọghọ bụ ndị dike (2009)
Ndị kacha enye goolu na otu (2009)
Bọọlụ na ịhụnanya ekwekọghị (2010)
Ndị nyere akara anaghị ada mbà (2010)
Ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ (2010)
Njem nlegharị anya site na ohere:
Anwansi na ohere (2012)
Ndị dike na ohere (2016)
Ndị nche nke Citadel:
Ahụ kacha mma nke Axlin (2018)
Ihe nzuzo Xein (2018)
Ozi Rox (2019).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Novela » Ahụ kacha mma nke Axlin